Ny ben'ny tanàna Yavaş dia nitady vola ho an'ny tetikasan'ny Mamak Metro | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Ny ben'ny tanàna Yavaş dia nitady vola ho an'ny tetikasan'ny Mamak Metro
12 / 02 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, Railway, ANKAPOBENY, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, Metro, TORKIA
trano fanjairana miadana ny filoham-pirenena mitady findramam-bola amin'ny tetik'asa nata vega metro
Ny ben'ny tanàna voalohany Ankara Metropolitan Mansur Yavaş dia nanambara fa miasa amin'ny zotra metro vaovao izay handalo ao Mamak izy ireo. Raha ny andalana vaovao izay hanitatra hatrany atsinanan'ny renivohitra dia mikasa ny hijanona enina, dia hikaroka loharano natomboka ho an'ny tetikasa. Amin'ny maha tetikasan'ny fitaterana vaovao, i Ankaray dia kasazarina hapetraka any andrefana. Ho an'ireo tetikasa vaovao, dia ny planeta fitaterana Erhan Öncü, izay nilaza fa "efa tokony efa natao sahady", hoy izy: "Raha toa ny asa fanavaozana dia ho matetika kokoa ny fiaran-dalamby ary ho azo kokoa ny fahaiza-manao."
Wallpaper NewspaperAraka ny vaovao tany Serkan Alan; “Ny ben'ny tanàna Metropolitan Ankara Mansur Yavaş dia nanambara tamin'ny fivoriana parlemantera fa nanomboka niasa tamin'ny tetikasan'ny metro vaovao tany Ankara izy ireo. Ilay tsipika vaovao, izay kasaina hanitatra avy any Dikimevi mankany atsinanan'i Ankara, dia mikasa ny hifarana ao amin'ny toeram-pivarotana Nata Vega. Nanomboka ihany koa ny fiasa hitadiavana trosa ho an'ny tsipika metro vaovao, izay kasaina hiomanana amin'ny fijanonana enina. Ny kaominina dia manohy ny asany amin'ny teboka haingam-pandeha amin'ny zotra vaovao haorina ho fitohizan'ny Ankaray. Amin'ny lafiny iray, mitohy ny ezaka hampifandraisana ny fijanonan'ny AŞTİ, izay fiandohan'ny Ankaray, any andrefany, mankany amin'ny tsipika metro amin'ny làlana Eskişehir.
Raha ny nambaran 'i Planner Planner Erhan Oncu, izay nilaza fa i Ankaray, izay manome serivisy amin'izao 8 kilometatra izao dia nokasaina hanohy ny ilany atsinanan' ny tanàna mandritra ny vanim-potoanan'ny Ben'ny tanàna taloha Murat Karayalcin, ity dingana an-dàlam-pitantanana miadana ity dia mifanaraka amin'ny drafitra voalohany amin'ilay tetikasa. Nilaza i Öncü fa “amin'ity dingana ity dia hita fa tsy azo havaozina ny rafitra Ankaray. Noho izany, havaozina ny roa tonta. Izy io dia fampanjambola azo antoka fa raha mahazo trosa sy fankatoavana avy amin'ny governemanta foibe izy dia fanontaniana hafa. "Ny governemanta foibe dia tsy mankasitraka ny kaominina CHP amin'ny zavatra rehetra," hoy izy.
Ny filazana fa ny tsipika Ankaray, izay manompo ny mponina ao Ankara nanomboka tamin'ny taona 1996, dia afaka mitondra olona 25 isan'ora, fa 8-9 kosa ny olona azo ampitaina, "hoy i Öncü," Raha vita izany fanavaozana izany, dia azo ampiharina matetika ny lamasinina ary ho azo kokoa ny fahaiza-manao. " .
'PROJEKY HITANAO IZAY AZO ATAO DIDINIKA'
Nampahatsiahiviny fa ny Drafitra Fandraharahana Ankara dia efa nomanina hiara-miasa amin'ny Oniversite Gazi nandritra ny vanim-potoanan'ny Ben'ny tanàna taloha tao Ankara Melih Gökçek, saingy tsy neken'ny filankevitry ny tanàna izany. "Tohizo ny rafitra lalamby taloha, andao isika hiresaka momba ireo vaovao dimy taona taty aoriana", hoy izy. Na ny minisiteran'ny fitaterana aza dia tsy natoky ny lalambe vaovao natolotry Gökçek. Mety tsy hanohitra ny tsipika efa nomanina ny ministera toy ny tao anatin'ny drafitra teo aloha. Tsy fanilikilihana izany, fa afaka miaro ny tsy hanome vola ihany koa izy ireo, toy ny rafitry ny lalamby any Istanbul. Azo jerena avy any ivelany ve, azo tanterahina nefa tsy misy antoka ara-panjakana, resaka manokana. Ny fijerena ireo tetikasa ireo dia tokony hatao izao. "
'SİSTEM MANDRAKANA NY FANAVOTANA AZONY AN'I GÖKÇEK'
Ny filazan'ny Oncu fa ny dingana maharitra hanatsarana ny fitaterana ao Ankara dia ny fanavaozana ny drafitry ny tompon'ny fitaterana, hoy i Oncu fa tokony halamina indray ireo orinasan-tserasera misy:
“Ny orinasam-pitaterana any Ankara dia mila alamina. Indrindra amin'ny fitaterana rafi-pitaterana, andiany vaovao sy fiara tokony hividy. Tokony halamina tsara ny fahazoan-dàlana. Ny rafitra dia mbola miasa amin'ny fandrindrana nataon'i Gökçek. Ny fandaharana nataon'i Gökçek dia rafitra iray izay niasa manokana ny orinasam-barotra manokana, ny bus ary ny minibus fa tsy ny rafitry ny lalamby. Ny rafitra dia mila fehezina ary namboarina indray. Ankara tsy manana tohatra fitaterana avo, fa vetivety dia maizina. Mihalehibe ny tanàna ary mandray ny fanapahan-kevitra tsirairay. Na eo aza ny tokony hanavaozana ny drafitry ny tompon'ny fitaterana mandritra ny fotoana maharitra, dia tokony hiomanana amin'ny fotoana fohy ny drafitra hetsika. ”
Ankara Metro sy ny Map Map Ankaray
Ny tambajotra metro marina ao Istanbul dia miadana be
Ben'ny tanàna Yavaş: 'Tapa-kevitra i Ankara handray fanapahan-kevitra ho an'ireo tetik'asa metro vaovao!'
Ny fitaterana mankany Ankara Mamak Bus Station dia omena amin'ny fiara an-dalamby na monorail.
Nisy famoriam-bahoaka natao hanorenana ny moron-tsambo tany Mamak
Fivoahana rano tao amin'ny Distrikan'i Mamak noho ny asa nataon'i Baskentray
10 Mile dia hanitatra mankany Ankaray Mamak
Filoha Erdoğan: "Hanolotra an'i Ankaray ho any Mamak mankany 10 Km izahay"
Ny drafitry ny fitateram-bahoaka ataon'ny vahoaka Yavaş
Ny Filoha dia manome ny fampanantenany maharitra ho an'ny Asphalt Share Share '
Ny Filoha Yavaş dia nanoratra tetikasan'ny tontolo iainana
Nomen'ny filohan'ny fampihorohoroana ny torolàlana
Vaovao Tsara amin'ny fitaterana mankany Ankara avy amin'ny filoha Yavaş
Fanambarana avy amin'ny Filoha Yavaş ka hatramin'ny mpianatra Yıldırım Beyazıt University
Sarintany amin'i Ankara Metro
Ankara Metro tetikasa
Drafitr'asan'ny mpitatitra ao Ankara
Tetikasa fanitarana Ankaray
Làlana fanjairana Nata Vega Metro lalana
Dikimevi-NATA Vega metro tetikasa
Lalana metro Mamak
Tetikasa metro Mamak
Tetikasa Metro Nata Vega